Izalathisi zeBest Forex zokuThengisa ngoJanuwari 2022-Iinkonzo kunye neNgxelo engafunyanwanga
Esona salathisi siphezulu se Forex 2021
Ukuphumelela xa ukurhweba nge-forex kunokuba nzima ukuhamba, kodwa oko akuthinteli izigidi zethu ekubeni zingabinayo yonke imihla- ezinye ziphumelele kunabanye.
Ngombulelo kukho ubuninzi bezixhobo ezikhoyo ukusikhokela ekwenzeni izigqibo ezinobunzima. Ukuthandwa kwezalathi kunye neetshathi kufikelela ekuqondeni kwexabiso lamaxabiso e-forex, uvakalelo lwentengiso, kunye nembali yexabiso.
Njengoko unokucinga-ukufikelela kulwazi oluncedo olunzulu olunjalo kunika abathengisi ulwazi lwangaphakathi xa kuziwa kumbono wentengiso ebanzi
Esona sixhobo sithandwayo sisetyenzisiweyo zizalathiso ze-forex, zazo zininzi ezahlukeneyo. Kwesi sikhokelo, sihamba ngezona zalathiso zibalaseleyo ze-forex ezikhoyo kunye nendlela onokuzisebenzisa ngayo ukuthatha imizamo yakho yorhwebo uye kwinqanaba elilandelayo.
Zithini iiMpawu ze-Forex?
Ngaphambi kokuba ucinge ngokuthengisa nge-intanethi kwi-intanethi, kuya kufuneka ungeze ezona zikhombisi zibalaseleyo kwisicwangciso sakho.
Zithini izalathiso ze forex? Ewe, izikhombisi ze-forex ziyinxalenye enkulu yohlalutyo lobuchwephesha, esetyenziswa ngabarhwebi kwihlabathi jikelele ukunceda inkqubo yokwenza izigqibo.
Xa ubandakanya izikhombisi kwisicwangciso sakho sokurhweba, uhlalutya ulwazi malunga nexesha elidlulileyo nelangoku. Uya kufumana oku kuqonda kuboniswe kwizalathi ezinje 'ngokushiyeka' kunye 'nokukhokela'.
Njengoko besesitshilo, ezona zikhombisi zibalaseleyo ze-forex ziqinisekisa ukuba abathengisi banakho ukuphonononga ngokupheleleyo ulwazi olufana; ukusebenza kwentengiso, imbali, idatha yexabiso langoku, iimvakalelo zentengiso, kunye nevolumu.
Kukho konke, uhlalutyo lobugcisa ngokubanzi luyinxalenye ebalulekileyo yokuthengisa ngempumelelo i-forex. Ke, ukucacisa, izinto eziphambili kuhlalutyo lobuchwephesha zezi zilandelayo:
Iimpawu zomthamo / zevolumu
Amanqanaba enkxaso kunye nokumelana
Njengoko ubona, kuninzi ngoncedo olufumanekayo kubarhwebi. Ezona zalathi zibalaseleyo ze-forex licandelo eliphambili ekuqikeleleni iimvakalelo zentengiso, phakathi kwezinye izinto, zokurhweba ngeemali zamanye amazwe.
Ngokusebenzisa izikhombisi zobuchwephesha ezifumanekayo ezandleni zakho, umi ithuba elingcono lokuba nempumelelo kwezorhwebo. Ngapha koko, uninzi lwabathengisi abanamava bafunga ngokuba nesicwangciso esomeleleyo sokurhweba ngasemva kwabo.
Ngobunzima, ukufunda ukuba izikhombisi zisebenza njani ngokuchanekileyo ngoku yindawo elungileyo yokuqala njengayo nayiphi na into. Oku kusizisa ngokutyibilikayo kwizalathi zethu ezili-10 ezilungileyo ze-forex - zonke onokuzongeza kwisicwangciso sakho sokurhweba ngemali.
I-1-Isalathiso samandla ahlobene (RSI)
Ukuqala ngeSalathiso saMandla esiNxibelelanayo- ngokubanzi kubhekiswa kuso njenge-RSI ngamafutshane - esi salathisi luhlobo oludumileyo lohlalutyo lobuchwephesha olusetyenziswa ngabarhwebi kwihlabathi liphela.
Kwabo abangaziyo, i-RSI ihlelwa njenge-oscillator kwaye yenye yeendlela ezilungileyo ezibonisa izixhobo kuluhlu lwethu. Abarhwebi basebenzisa i-RSI ukufumanisa amandla, ukubonisa xa i-asethi ikwinkampu engaphezulu okanye ethe kratya.
Le oscillator ikwagqwesile ekubonakaliseni zombini iimpawu ezifihlakeleyo nezicacileyo zokwahluka kwi Iimarike zangaphambili.
Ngamafutshane, i-RSI bubungakanani be ayinamsebenzi Ixabiso lokuvala ngokunxulumene ne inzuzo Ixabiso lokuvala-liboniswe njengepesenti eza kutshintsha phakathi kwe-0 ne-100.
Ukubala kujongeka njengoku:
I-RSI = 100 - 100 / (1 + RS).
Sikhankanyile ukuba i-RSI ibonisa amandla kwintengiso yemali, ke izalathisi zolu hlobo zisetyenziselwa ukubala isantya sokuhla kwamaxabiso e-forex.
Ukubeka ngokulula, izikhombisi zamandla ziyimilinganiselo yexesha elifutshane. Ukubonisa ukuzinza kunye nempilo ngokubanzi yokutshintshwa kwamaxabiso asele ekhankanyiwe- kulapho kuveliswa khona 'ukuthengisa' kunye 'nokuthenga okungaphezulu'.
Njengoko sele kuphawuliwe, i-RSI ibonisa ixabiso eliphakathi kwe-0 kunye ne-100 elihamba nokuhla kwamaxabiso.
Jonga apha ngezantsi ukucaciselwa kokubini:
Ukuba ukufundwa kwe-RSI kungaphezulu kwama-70-oku kuhlala kubonisa ukuba ukhuseleko luku egqithisileyo kwintsimi.
Ukuba ukufundwa kwe-RSI kungaphantsi kwe-30-oku kuhlala kubonisa ukuba ukhuseleko luku ku gqithiswa kwintsimi.
Ke yintoni kanye le nto egqithisileyo uphawu kwaye kutheni iluncedo? Uphawu lokuthenga okungaphezulu lukuxelela ukuba isibini esithile se-forex onomdla kuso sigqithile.
Oku kuhlala kulandela ixesha apho i-asethi ikhe yafumana umkhondo wokunyuka. Njengoko uyazi, ixabiso alinakuqhubeka kwicala elinye ixesha elide ngaphandle kokwenza i-U-turn.
Kananjalo, i-RSI ikunika ithuba elingcono kakhulu lokuqikelela ukuba kwenzeka nini ukubuyela umva. Umzekelo, ukuba i-RSI ihambile ngaphezulu kwama-70, oku kungakhombisa ukuba ukwehla kwexabiso kusondele.
Ergo, ukuba utolika ukwakheka komndilili njengophawu lokuba umva uyeza-unokukhetha thengisa kwaye utshixe inzuzo yakho
Ukuba kwelinye icala, ukuba ubona ifayile ye- ku gqithiswa uphawu, ngokuchaseneyo kunokwenzeka ukuba kwenzeke. Oku kunokukunika isibonakaliso sokuba kuya kufuneka 'uhambe ixesha elide'.
2 -Ukuhamba umndilili (MA)
Forex yorhwebo, ngakumbi kwixesha elifutshane, kubandakanya ukugcina ulwazi ngokuhambelana namaxabiso akutshanje.
Umndilili wokuHamba (MA) sesinye sezona zalathi zibalaseleyo ze-forex njengoko iqaphela ulwalathiso lwendlela yokuhamba kwamaxabiso-ngelixesha lisusa nengxolo eyongezelelweyo yokuhla kwamaxabiso exeshana.
Ukubala i-MA kunokukunceda kakhulu ekutyhilweni kwazo naziphi na iindlela ezikhoyo kunye nezikhulayo. Umndilili ohambahambayo ufuna umndilili usebenzisa ubalo lwemathematika kwaye usebenzise idatha ukufumana imeko.
Iimpawu ze-MA zikhankanywe apha ngasentla kunye nomndilili wexabiso- kunye namanqanaba aphume amanyathelo ixabiso ngokusika uphazamiseko lwexesha elifutshane.
Uninzi lwabarhwebi be-forex basebenzisa amaxesha amaninzi xa kuveliswa imilinganiselo ehambayo. Amaxesha abekiweyo ahamba phambili athandwa kakhulu ukuba abe ngama-50, 100, kunye nama-200 eentsuku ezihambayo.
Nangona i-MA sisixhobo sobuchule sokuhlalutya ubuchwephesha- ngokungathandabuzekiyo sesinye sezona zilathisi zibalaseleyo ze-forex, ubukhulu becala ngenxa yokulula kwayo.
Ngapha koko, isalathiso esihambahambayo somndilili sinokulungelelaniswa nakweliphi na ixesha. Oku kuyenza ukuba unganeli nje ukujonga iintsingiselo kodwa ufumane nokuqonda ukuba i-asethi isiya kweliphi icala kunye nexabiso lomthengi eliphakathi.
Xa kukho imeko esezantsi, i-MA inokwenza njengelingi, okanye 'ukuxhathisa' ngokuthetha. Kwelinye icala, phakathi kwendlela ephezulu, umndilili wenza 'njengenkxaso', okanye isiseko.
Kuya kufuneka siqaphele ukuba ngenxa yokuba i-MA inokubalwa ngalo naliphi na ixesha elibekiweyo, uya kuba nakho ukulisebenzisa ukuqikelela imeko yexesha eliphambili kunye nexesha elide.
Ukuba unqwenela ukubala i-MA ngokwakho, yongeza nje iseti yamanani kwaye wahlule elo nani ngamaxabiso afanelekileyo.
Yitsho ukuba unqwenela ukubala umndilili ohambahambayo wexesha elimisiweyo leminyaka emi-2
Yongeza kunye onke amanani ngaphezulu kwexesha
Yahlula inani lilonke ngo-2
Usebenzisa ii-subsets ezininzi zedatha, i-MA ifumana ixabiso eliphakathi, kwaye oku kubaluleke kakhulu kunokusetyenziswa ngokudibeneyo nohlalutyo lwetshathi.
Njengoko sichukumisile, esi salathisi se-forex sisixhobo esiluncedo ekuqinisekiseni amanqanaba oxhathiso kunye nenkxaso. Zimbini iintlobo zee-MAs ngaphambili kwaye 'ziyimilinganiselo elula yokuhamba' (SMA) kunye 'nomndilili wokuhambisa ocacileyo' (EMA).
I-SMA ibonelela ngolwazi kuwo onke amaxabiso, kwaye eyokugqibela igxila kumaxabiso asandula-esithetha ngawo ngokweenkcukacha kungekudala.
I-3-Ukuhambisa umndilili wokuDibana kokuDibana (MACD)
I-MACD sesinye isixhobo esithandwayo kuluhlu lwethu lwezalathiso ze-forex. Amabala amatsha atshintsha ngamandla afezekiswa ngokuzoba uthelekiso kwi-2 ye-avareji ehambayo.
Ngokudibanisa esi salathisi se-forex kwisicwangciso-qhinga sakho sokurhweba uya kuba nakho ukuqonda amathuba okurhweba anokufumana inzuzo ajikeleze uxhathiso kunye namanqanaba enkxaso.
Kulabo abangaziyo, 'ukwahluka' kubonisa ukuba imilinganiselo emi-2 ehambayo iyashenxelana. Ngelixa 'ukuhlangana' kubonisa ukuba baya kwelinye.
Jonga inkcazo elula yendlela isibonisi seMACD esenziwe ngayo:
Umgca womqondiso: Lo mgca ubonakalisa utshintsho kutshintsho lwexabiso, kwaye ikwasebenza njengesiqalo- ngokuthengisa kunye nokuthenga imiqondiso. Umgca wesiginali lixesha le-9 le-MA le-MACD
Umgca we-MACD: Lo mgca ubala umsantsa phakathi kwemilinganiselo emi-2 ehambayo. Umgca we-MACD wenziwa ngokususa ixesha lama-26, ukusuka kwixabiso lexesha le-12.
I-histogram: Lo mgca ubala umahluko phakathi komgca wesiginali kunye neMACD
Njengoko ubona, sithethe izinto ezi-3 ezilapha ngasentla-nangona kunjalo, kuphela ngumgca wesiginali kunye nomgca we-MACD osetyenziselwa ukubala iMACD.
I-MACD iboniswa njengeyona nto ibizwa ngokuba yi 'histogram'. Uya kubona umahluko phakathi komqondiso kunye nemigca ye-MACD, kwifom yegrafu.
Ingathathwa njenge thengisa uphawu ukuba i-MACD idlula kumgca wesiginali ukusuka phezulu. Ukuba kwelinye icala, ukuba iyagqobhoza ivela ngaphantsi ungayisebenzisa njenge kuthenga umqondiso.
Esi salathisi se-forex silula kwaye sinokuthenjwa. Awunako kuphela ukujonga ukomelela kunye nokujika okunokubakho komkhwa - kodwa kwanendlela enamandla ngayo ukuthengisa kunye nokuthenga imiqondiso.
Oku kwenza i-MACD yenye yezona zikhombisi zibalaseleyo zabathengisi kuwo onke amanqanaba obuchwephesha xa kufikwa kumzekeliso ohlaziyiweyo weemvakalelo zentengiso.
4 - Umndilili wokuHamba oPhakathi (EMA)
Njengoko besesitshilo ngaphambili, i-MA iluncedo ekuchongeni iintsingiselo-nangona, esi salathisi sigxile ngakumbi yakutshanje idatha yexabiso. Kananjalo, abanye abantu babiza i-EMA 'ngokubonakalayo ubunzima umndilili wokuhamba '.
Ngethuba elifutshane, izikhombisi eziqhelekileyo ezisetyenziswayo ze-EMA zihlala ziphakathi kweentsuku ezili-12 ukuya kwezi-26, okanye kwixesha elifutshane 5-20 imizuzu.
Xa ukhetha isicwangciso sexesha elide, abathengisi bahlala basebenzisa phakathi kwe-50 kunye ne-200-day indicators.
Ngokubalulekileyo, ungasebenzisa i-EMA ecaleni kwezinye izikhombisi kuluhlu lwethu lwezona zimpawu zingcono zokuqinisekisa ukuhamba kweemarike kunye nokulinganisa ukusebenza kwazo.
5 - iBhendi yeBollinger
Iibhendi zeBollinger sesinye sezibonakaliso ezibalaseleyo ze-forex ezibonisa uluhlu lwamaxabiso iasethi yezemali ethanda ukurhweba ngaphakathi. Ukubeka ngokulula, esi salathisi yitshathi yeenkcukacha-manani ebonisa ukungazinzi kunye namaxabiso eperi yexesha ngokuhamba kwexesha
Ukusondela 'kweebhendi' omnye komnye, kokukhona ukungazinzi kwesixhobo kucingelwa ukuba kunjalo. U-Ergo, ekude kude kude komnye nomnye amabhanti, kokukhona ukungazinzi kucingelwa ukuba kunjalo.
Ukuba isibini se-forex is Ukurhweba ngaphandle kwamanqanaba okuthengisa 'aphakathi' -iBollinger Bands ziya kukubonisa oku. Oku kuluncedo ngakumbi ekuzameni ukuqikelela ukuhla kwamaxabiso kwixesha elide.
Ukuba ixabiso liphindaphindeka lisuka ngaphezulu kwebhendi ephezulu - oku kubonisa ukuba iiasethi ezinemali zinokuba kwinkampu 'ethengiweyo'. Ukuba ixabiso lizifumana liphantsi kwebhendi- oku kubonisa ukuba isenokuba kwinkampu 'engaphaya'.
Ukuba nezixhobo ezikhoyo ukuze ukwazi ukubona kwangaphambili ii-asethi ezingaphezulu okanye ezingaphezulu kwezinto kubalulekile ukuba uqikelele nini ukungena okanye ukuphuma kwintengiso.
Masithi ujonge ukufundisisa amaxabiso ezembali, kunye neentshukumo zangoku zexabiso, kwibhidi yokuhlukanisa amashishini aphezulu anokubakho. Kwimeko apho, i-Ichimoku Cloud inokuba sesinye sezibonakaliso ezilungileyo kakhulu zomsebenzi.
Njengazo ezinye izikhombisi ze-forex kuluhlu lwethu, i-Ichimoku Cloud iphakamisa ukumelana kunye nenqanaba lokuxhasa abathengisi be-forex.
Nangona kunjalo, ngokuchaseneyo, ikwavavanya isantya sexabiso, emva koko sinikezele imiqondiso Forex ukukunceda kwinkqubo yokwenza izigqibo. Abahwebi abathanda itshathi epakishwe kwimiqadi enolwazi banomhlambi kwesi salathisi.
Into enomdla kukuba, ngesiJapan 'Ichimoku Kinko Hyo' iguqulela 'kwitshathi yokujonga enye', kuba inika uluhlu olubanzi lolwazi kwindawo enye.
Isalathi siqikelela ukuxhathisa kunye nenqanaba lenkxaso langoku nelizayo, kunye nokubona imeko yentengiso kunye nolwalathiso abanokungena kulo.
Ukucoca inkungu, uya kubona apha ngezantsi ukonakala kwezikhombisi ezi-5 zeIchimoku Cloud Isalathi yenziwe:
Isithuba seSenkou A: Lo mgca uhlala utyheli ngombala kwaye ubhekiswa kuwo njenge 'phambili span A'. Isithuba esiphambili se-A kwaye yindawo esembindini phakathi kwe-Kijun Sen kunye ne-Tenkan Sen. Umgca uqikelelwa ngamaxesha angama-26 ngaphambi kwexesha kwaye ubaliwe- i-Kijun Sen kunye ne-Tenkan Sen, yahlulwe ngo-2.
I-Senkou Span B: Lo mgca uhlala uluhlaza okwesibhakabhaka ngombala kwaye ubhekiswa kuwo njenge 'phambili span B'. Ukukhokela kwe-span B ngumndilili wokuhamba wenqanaba eliphakathi ukusuka kumaxesha angama-52 angaphambili. Umgca uqikelelwa ngamaxesha angama-26 ngaphambi kwexesha. Ukubala kuyahamba - amaxesha angama-52 aphezulu kunye namaxesha angama-52 asezantsi, ahlule ngo-2.
I-Tenkan-sen: Lo mgca uhlala umbala obomvu kwaye ukwabizwa ngokuba 'ngumgca wokuguqula'. I-Tenkan-sen iyelenziwe njenge-avareji yokuhamba kwenqanaba eliphakathi lexesha le-9 elidlulileyo
I-Kijun-sen: Lo mgca uhlala umhlophe ngombala kwaye ubizwa ngokuba 'sisiseko'. I-Kijun-sen iyelenziwe njenge-avareji yokuhamba kwinqanaba eliphakathi lamathuba angaphambili angama-26
Isithuba seChikou: Lo mgca uhlala uluhlaza ngombala kwaye uhlala ubizwa ngokuba yi 'lag span'. Ukucwangciswa kwamaxesha angama-26 kwixesha elidlulileyo- isenkou span yenza isiseko 'selifu'. Ukuba isenkou span B ingaphantsi kweSpan A ilifu liya kuba luhlaza ngombala. Ukuba u-A ungaphezulu kwe-B ilifu ngokubanzi libomvu ngombala.
Njengoko kubonakala ngentla, ngokufunda isibonisi se-Ichimoku Cloud uyakwazi ukubeka iliso 'kwimozulu' yeemarike.
Ukwenza lula nangakumbi:
Ukuba ilifu libomvu kunokwenzeka ukuba kukho ibhola kwindlela.
Ilifu eliluhlaza lithanda ukubonisa a bukhoma kwindlela.
Ilifu elincinci lihlala likubonisa ukuba imeko yangoku iyancipha.
Ububanzi belifu, kokukhona umkhwa uthande ukuba namandla.
I-oscillator ye-stochastic ibalwa njengesalathiso somfutho. Izobe uthelekiso phakathi kwexabiso lokuvala elichanekileyo kunye noluhlu lwamaxabiso ngaphezulu kwexesha elithile.
Sicinga ukuba i-oscillator ye-stochastic yenye yezona zikhombisi zibalaseleyo ze-forex kwinqanaba layo elomeleleyo lokuchaneka kunye nokulula.
Esi sesinye isikhombisi kuluhlu lwethu esibonisa xa iasethi iwele kwindawo engaphezulu 'okanye engaphezulu'
Ukuba ukufundwa kungaphezulu kwe-80 ujonge intengiso ewela kwi egqithisileyo udidi. Ukuba kufundwa kungaphantsi kweminyaka engama-20- oku kuhlala kubonisa ku gqithiswa ntengiso.
Qaphela, ukuba imeko ibonakala yomelele ngokwenene, oko akuthethi ukuba ulungiso lweemarike luza kunyathela ngononophelo. Kwakhona, yiyo loo nto kufuneka udibanise izikhombisi ezininzi ze-forex kunye ukuqinisekisa iziphumo zakho.
Nangona kunjalo, i-stochastic oscillator ibonelela ngokuthenga ngokuthengisa kunye neempawu, eziluncedo olumangalisayo xa kuthengiswa i-forex. Isalathisi se-forex sisebenza kakuhle kunye ne-RSI.
8 - Ukubuyela endaweni kwakhona kweFibonacci
Ukubuyiswa kweFibonacci kwenza uluhlu lwethu lwezalathiso ze-forex ezilungileyo kuba kunceda abathengisi ukubala imarike 'yokutsala' (okanye ukunqumama okwethutyana kwimeko).
Ukutsala rhoqo kudala amathuba okuthenga kubarhwebi abafuna ukukhwela imeko ephezulu. Ngokusisiseko, ukubuyisela endaweni kwakhona i-Fibonacci sisixhobo sokuzoba esikwenza ukuba ukwazi ukulinganisa nakuphi na ukubuyela umva kwiimarike.
Esi salathisi se-forex sinokusetyenziswa kwizigaba ezahlukeneyo zamanyathelo exabiso lentsebenzo, afezekiswe ngokusebenzisa amanqanaba awahlukeneyo okubuyisela. Inqanaba ngalinye lilinganisa inani ngokweepesenti ngokwemarike ethe yafakwa phakathi kwamanqaku amabini ahlukeneyo.
Amanqanaba esalathisi ahlala ngolu hlobo lulandelayo:
Phakathi kwe-23.6% kunye ne-38.2% 'yokubuyisela endaweni engekho nzulu' -bonisa indlela eshukumayo ekhawulezayo nenamandla
Phakathi kwe-61.8% kunye ne-78.6% 'yokubuyisela endaweni enzulu' - iimarike eziqinileyo ezomeleleyo, nangona zinesantya esisezantsi kunokubuyela umva nzulu
Ukubuyiselwa endaweni kweFibonacci kunokusetyenziswa phakathi kwawo nawaphi na amanqaku amaxabiso abalulekileyo- aphezulu kunye asezantsi-enza amanqanaba phakathi kwamanqaku ama-2.
Kuyacetyiswa ukuba wenze i-stop-loss order ngezantsi ukutshintsha kwexabiso elidlulileyo kwimo enyukayo- kunye eliphezulu ngaphezu kokutshintsha kwexabiso elidlulileyo kwimo yokuhla.
Xa kubonakala ngathi kukho imeko enyukayo uya kuba nakho ukusebenzisa ukubuyela kwakhona kweFibonacci ukulinganisa ukuba ingakanani irally enkulu esele iyekelelwe.
Lilonke, ukubuyiswa kweFibonacci yenye yezona zikhombisi zibalaseleyo zokuchonga nini ukungena kwimarike. Uya kuba nokuqonda okungcono ngakumbi ukuba liphi indawo elungileyo yokubeka 'ukumisa-ukulahleka' kunye 'nee-odolo zokwenza inzuzo'.
9 - Umndilili weeNkcazo eziMiselweyo (ADX)
I-avareji yesalathiso sokwalathisa, okanye i-ADX, sesinye isixhobo esisetyenziswa ngabarhwebi abaninzi be-forex yokuseka amandla endlela ethile.
Enye yezona zinto zinzima malunga nokuthengisa i-forex, okanye nayiphi na i-asethi, kuchaza ngokuchanekileyo umkhombandlela wendlela. I-ADX yenziwe ngezikhombisi ezi-3 kubandakanya i-ADX (emnyama), eyiNtloko (eluhlaza), kunye neNegative (ebomvu) Izikhombisi eziKhokelayo.
Imikhombandlela elungileyo kunye nengalunganga yesixhobo ibonisa ukuba imeko ibuthathaka okanye inamandla. Amanqanaba e-ADX ukusuka ku-0 ukuya ku-100. Nantoni na engaphaya kwama-25 ithambekele ekukhombeni kwimo eqhubekayo eqhubekayo.
Ngokusekwe kwi-avareji yokuhamba, kwaye ihlala ithatha ixesha leentsuku ezili-14, i-ADX igxila kumandla esiqhelo-ngokuchasene nolwalathiso lwayo. Ukuba umgca oluhlaza (ulwalathiso oluqinisekileyo) ungaphezulu kobomvu (umkhombandlela ongalunganga) -inokuba imeko yomelele.
Akunyanzelekanga ukuba usete i-ADX kwixesha elibekiweyo leentsuku ezili-14, njengoko itshathi inokutshintshwa ukuze inikeze ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokoluhlu lwamaxabiso.
Ukuphambuka okumiselweyo (SD)
Ukuphambuka okuqhelekileyo kubalo lokusasazeka. Isixhobo senza uluhlu lwethu lwezona zimpawu zibalaseleyo ze-forex ikakhulu kuba xa zisetyenziswa ecaleni kwezinye izikhombisi, zinokunceda ngokwenene abathengisi ukuba benze ukhetho olunolwazi olungcono.
Esi sixhobo sohlalutyo lobuchwephesha sikhanyisa ukukhanya kwixabiso lentengiso, kwaye sicinga ukuba kufuneka libandakanywe kwisicwangciso sakho sokuthengisa.
Ifomula yemathematika ye-SD iya kukukhokela ekungeneni kwintengiso ngexesha elichanekileyo- ungasathethi ke ngokufumanisa ukuhlengahlengiswa kwendlela kunye nokuseka iithagethi zorhwebo.
Esi salathisi se-forex silula ngokwaneleyo kwii-newbies, kodwa sinamandla kuwo onke amanqanaba ezakhono nangona kunjalo. Ukuphambuka okumiselweyo sisixhobo esiluncedo ekulawuleni ngcono umngcipheko / umvuzo.
Nceda ufumane apha ngezantsi kwindlela yokubala yokuphambuka okuqhelekileyo:
Khangela 'kuthetha ukuvalwa kwexabiso' ngeli xesha ujonge kulo - umzekelo, amaxesha angama-20
Khangela ukuphambuka ngalo lonke ixesha - eli lixabiso lokuvala thabatha ixabiso eliqhelekileyo
Khangela isikwere kuko konke ukuphambuka -ongeze ezo ziphambeko ziphindwe kabini
Yahlula inani leziphambuka ngesixa-mali esifunyenweyo
Emva koko, yenza i-SD njengengcambu yesikwere yexabiso elifunyenwe kwinyathelo lesi-4
Njengoko besesitshilo, esi salathisi sibala ukuba amaxabiso aphambuke kangakanani ukusuka kumndilili. Ngokubhekisele kuseto lwamaxesha, abantu abaninzi bakhetha ukuseta okungagqibekanga kwamaxesha angama-20-ukuhlala phakathi kwezinto ezigabadeleyo.
Ngale nto ithethwayo, ukuba nesalathi se-forex esinika imiqondiso emininzi kunokwenza izinto zibe nzima, kwaye ke kuchaphazele ukuzuza okwaziyo ukukwenza.
Uzifunda njani ezona ziBonakalisi ze-Forex ziBalaseleyo
Ukuba uziva woyisiwe lulwazi olunikezwe kwisikhokelo sethu esingcono sezalathiso ze-forex ukuza kuthi ga ngoku, ungakhathazeki.
Kuba uninzi lwezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha zikhona ukunceda abathengisi be-forex, kukho amakhulu ajolise kubaqalayo nawo. Zonke ezo zijolise ekukuncedeni ukuba ufunde ukusebenzisa izikhombisi ze-forex ngokufanelekileyo.
Sidwelise apha ngezantsi ukuphefumlelwa, sigubungela ezinye zeendlela onokuzifundisa ngazo ngezona zikhombisi zibalaseleyo ze-forex.
Zama iikhosi ze-Intanethi
Kukho ikhosi ekwi-Intanethi malunga nawo nawuphi na umxholo kwezi ntsuku. Izikhombisi ze-Forex azifani.
Unokuzama ikhosi ekwi-Intanethi ngokuthe ngqo kwizalathi ze-forex okanye ngokwenza ukhangelo olulula lwe-intanethi. Ngokubalulekileyo, uya kufumana iikhosi ezininzi ezijolise ekufundeni uhlalutyo lobugcisa ngokubanzi.
Oku kunokukunceda ukuba uphephe ukwenza iimpazamo ezifanayo njengabaqalayo kunye nokuntywila ngamehlo avaliweyo.
Apha kuFunda uRhwebo 2, sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo ze Iikhosi ze forex, kubandakanya ikhosi yokugqibela yezalathiso zorhwebo-ezigcwele-ulwazi.
Sebenzisa iAkhawunti yeDemo
Olunye ukhetho xa kuziwa kukuhlonipha kwizakhono zakho kwizikhombisi ze-forex kukusebenzisa iiakhawunti zedemo zasimahla.
Kulabo abangaziyo, uninzi lwabathengi be-intanethi abakwi-Intanethi babonelela abathengi ngeakhawunti yasimahla, epakishwe ngemali yephepha.
Iakhawunti nganye yedemo ilingisa iimeko zentengiso zehlabathi-lokwenyani kwaye uyakwazi ukuziqhelanisa nezakhono zakho zohlalutyo lobuchwephesha de umxholo wentliziyo yakho. Elona candelo lililo, awunyanzelekanga ukuba ubeke emngciphekweni nayiphi na imali eyinkunzi.
Xa ixesha lifika kwaye uziva ukulungele ukuqala ukurhweba nge-forex ngemali yokwenyani, unokuhlala utshintshela kwi-akhawunti ephilayo ngokulula.
Ngeliphi inqanaba, uya kuba nokuqonda okunzulu ngakumbi malunga nendlela yokusebenzisa ezona zibonakaliso zibalaseleyo kwi-forex yakho kunye nokufumana inzuzo ecacileyo xa usenza ukhetho lokurhweba.
Funda iincwadi zezeMfundo
Sonke sifunda ngokwahlukileyo. Abantu abawela kudidi 'lwe-kinesthetic', oko kuthetha ukuba bafunda ngcono ngokwenza ', banokukhetha ukusebenzisa iakhawunti yedemo.
Nangona kunjalo, ukuba ungumfundi weelwimi, uya kukhetha ngakumbi ukufunda ezona zikhombisi zibalaseleyo ngokufunda incwadi. Kukho amakhulu eencwadi zokurhweba kwangaphambili ezikhoyo kwizandla zakho
Nokuba ukhetha ukufunda incwadi yamaphepha emveli, eyedijithali, okanye incwadi yeaudiyo- kuya kubakho incwadi ekonwabisa ukuthanda kwakho.
Ukukunika uncedo sidwelise ezinye zeencwadi ezingcono esizifumeneyo, zonke ezigubungela izikhombisi ze-forex kwaye zinje:
Uhlalutyo lobuGcisa kusetyenziswa amaxesha amaninzi abhalwe ngu-Brian Shannon
IBollinger kwiBhendi yeBollinger- nguJohn Bollinger
Uhlalutyo lobuGcisa lweeMarike zezeMali- nguJohn Murphy
I-Forex yabaQalayo-ngu-Anna Coulling
Ukuqala kuHlalutyo lobuGcisa-nguJack Schwager
Iindlela zokuCwangcisa iziphatho zezibane zaseJapan- nguSteve Nison
I-Encyclopedia yamashadi eTshathi- nguThomas Bulkowski
Uhlalutyo lobuGcisa luchaziwe - nguMartin Pring
Njengoko ubona, esona sikhokelo sikwizalathiso zethu zeyona mpahla ifumanise ukuba ayisiyiyo kuphela ininzi yeencwadi zorhwebo ezijolise kwabaqalayo, kodwa unokufumana ngokulula uhlalutyo lobuchwephesha olusekwe kufundo.
Iimpawu ezilungileyo ze-Forex ze-2021: Iingcamango zokugqibela
Kwesi sikhokelo, sigubungele ukhilimu wesityalo xa kufikwa kwizalathi ze-forex. Isixhobo ngasinye siya kwenza ukongeza okuhle kuso nasiphi na isicwangciso sokurhweba.
Nabani na osebenzisa rhoqo izikhombisi ze-forex uya kukuxelela ukuba uhlalutyo lobuchwephesha lungathatha ixesha lokufumana. Nangona kunjalo, nje ukuba ufumane ukuxhoma kuyo, ulwazi olufunyenweyo lubaluleke kakhulu.
Ukuba usaqala kwilizwe lezorhwebo kwaye awuqinisekanga ukuba ungaqala phi ekufundeni ezona zikhombisi zibalaseleyo, kukho uncedo olukujikelezileyo.
Jonga umrhwebi wakho okwi-Intanethi ukubona ukuba ungafikelela kwiakhawunti yedemo yasimahla, kuba le inokuba yindlela elungileyo yokufumana izikhombisi- kwiimeko zentengiso ezibonisa ubomi bokwenyani.
Ukuba ungumfundi wolwimi, unokufumana iimfumba zezinto zokufunda ezikwi-Intanethi- kubandakanya neencwadi, kunye nezifundo zethu zokufunda zorhwebo ezi-2 ezixabiseke kakhulu kubantwana abasandul 'ukuzalwa. Unokujonga kwakhona iqela lethu leempawu zamahhala ze-forex ezithathwa njengeyona nto ibhetele Imiqondiso ye-forex yocingo iqela kwiwebhu. Oku kwenza ukuba ufunde iintambo kwinduduzo yekhaya lakho.
Ngaba ndingaziqhelanisa nokusebenzisa izikhombisi ze-forex simahla?
Ewe. Ukuba iqonga lakho lokurhweba elikhethiweyo linikezela ngeakhawunti yeedemo kubaxumi, ungarhweba nge-forex ngemali yephepha kunye nokuziqhelanisa nezona zikhombisi zingcono ze-simahla.
Leliphi elona phawu lihle le-forex yeendlela zokujonga?
Ukuhamba komndilili lolunye lolona khetho lukhethwayo kubarhwebi abahamba phambili be forex. Abanye baquka i-MACD, kunye ne-Relative Strength Index (RSI),
Ngaba ndinokuba sisityebi ndisebenzisa izikhombisi ze-forex?
Akukho mpendulo imnyama namhlophe. Ngelixa izalathi ze forex zingenako ukwenza imali ngese - ukufunda ezona zikhombisi zibalaseleyo kunokuwonyusa amathuba akho okuphumelela ekuthatheni izigqibo ezifanelekileyo.
Ngaba ndingenza ikhosi ukusuka ekhaya ukuze ndifunde ezona zikhombisi zibalaseleyo ze-forex?
Ewe unako. Kukho iimfumba zezifundo ze-Intanethi ezijolise kwabaqalayo. Apha kuFunda u-2 woRhwebo, sinezifundo ezininzi ze-forex onokukhetha kuzo-ukuze ufunde kwinduduzo yekhaya lakho.
Yeyiphi incwadi ebalaseleyo yemfundo malunga nezikhombisi ze-forex?
Kukho iimfumba zeencwadi zemfundo malunga nezalathi ze forex. Nangona kungakhange kubhekiswe ngqo kwizalathi, ezimbini zeencwadi ezilungileyo malunga nohlalutyo lobuchwephesha kurhwebo lwe-Forex 'luHlalutyo lobuGcisa lweeMarike zezeMali- nguJohn Murphy' kunye 'noHlalutyo lobuGcisa oluchaziweyo- nguMartin Pring'